बाइकको चेन स्पोर्केट गएर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी बचाउनुस् - MeroAuto
बाइकको चेन स्पोर्केट गएर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी बचाउनुस्
2076:4:25 6:50 AM
यसका अलावा समय समयमा चेनको अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । चेनलाई धेरै टाइट गरेर चलाउँदा समेत चेन चाँडै खराव हुन्छ ।
नाडा अटोशोमा केटीएमः ड्यू...
भारतमा सार्वजनिक भयो सुजु...